Umkhiqizi nomhlinzeki wase-China Flake graphite I-Jinglong
I-Flake graphite isetshenziswa kabanzi kuma-Refractories athuthukile nokumbozwa embonini ye-metallurgical. Okufana ne-magnesia carbon brick, i-crucible, njll. Kusisimamisi sokuqala izinto zokwakha iziqhumane embonini yezempi, ukwenza i-desulfurizing nokusheshisa i-ejenti yokucwenga imboni, ukuhola ipensela embonini ekhanyayo, ibhulashi lekhabhoni embonini kagesi, i-electrode yomkhakha webhethri, isisusa somanyolo wamakhemikhali imboni, njll. I-graphite ye-Flake ingaqhutshekelwa phambili ukukhiqiza i-graphite emulsion, engasetshenziswa njenge-lubricant, i-ejenti yokukhulula, i-ejenti yokudweba, ukumboza okuqhubayo, njll. Ingasetshenziswa futhi njengezinto zokusetshenziswa zemikhiqizo ye-graphite eguquguqukayo, njenge-graphite eguquguqukayo izimpawu kanye nezimo imikhiqizo graphite esiyinhlanganisela.
Izinhlobo ze-flake graphite zihlukaniswa ngokuya ngokuqukethwe kwekhabhoni: isibonelo, i-high-purity graphite enekhabhoni engu-99.99-99.9%, i-carbon-graphite ephezulu enokuqukethwe kwekhabhoni okungu-99-94%, i-carbon graphite emaphakathi enekhabhoni engu-93 -80%, ne-carbon-graphite ephansi enokuqukethwe kwekhabhoni okungu-75-50%.
Izici ze-flake graphite: i-crystal flake iphelele. Ifilimu mncane futhi inobunzima obuhle. Izakhiwo ezinhle kakhulu zomzimba nezamakhemikhali, ezinokumelana nokushisa okuhle, ukuzithambisa ngokwakho, ukuqhuba okushisayo, ukuqhuba ngogesi, ukumelana nokushaqeka okushisayo, ukumelana nokugqwala nezinye izinto.
Langaphambilini I-graphite heater
Olandelayo: Ubumsulwa obuphezulu be-graphite tube